Alianza Arkana, Manely Ao Anaty Tambajotra Ireo Fahalalana Nentin-drazana Sy Ny Andavanandron’ireo Shipibo ao Ucayal, Pero · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Mey 2016 14:57 GMT
“Toy izao no karazan'asa atao ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany iraisan-kolontsain'ny fiarahamonim-pirenena an-drenivohitr'i Shipibo-n'i Bena Jema, sary hosodoko iray vita tamin'ny feta, eo amin'ny rindrina, niaraka tamin'ireo mpianatry ny sekoly, mampiseho ireo tontolo efatra araka ny fijery shipiba ny eny amin'ny habakabaka”. Sarin‘ny pejy Facebook-n'ny Allanza Arkana, tamin'ny Febroary 2015, (famerenana nahazoana alalana).
Ny Alianza Arkana, araka ireo fomba filazàny azy manokana, dia “vovonana fototra malaza mba hanomezana aina indray ny Amazonia peroviana”, amin'ny alalan'ny fanohanana ireo tompontany sy ireo fomba nentimpaharazan'izy ireo. Iray amin'ireo tetikasany, ny Chariboan Joi, izay ny tanjona dia ny “hanely eo amin'ny tambajotra ireo tantara, ireo fahalalana nentimpaharazana sy ny zavatra iainana andavanandro”, voafidy sy nomen'ny Rising Voices loka tamin'ny taona 2014.
Miankina amin'ny fahafahana mitrandraka ny ala tropikalin'i Amazonia sy ireo mponina ao aminy ny fahatsaràn'ny fiainana eto an-tany. Tena ilaina ny fiarahamiasan'ireo fiarahamonim-pirenena mba hampipongatra indray io fahafaha-mioitra io. Mamorona fifandraisana mifamaly eo amin'ireo fiarahamonim-pirenen'i Amazonia peroviana ny Alianza Arkana, mba hanorenana ireo vahaolana maharitra sy hiadiana amin'ny fomba misy famoronana ireo fanamby ara-tsosialy syara-tontolo iainana izay atrehantsika ankehitriny”.
Eo amin'ny lafiny fanatanterahana, mitsangana ho vondrona iray somary mifangaro ny Alianza Arkana (AA). Etsy ankilany ahitana ireo vahiny mpiavy avy amin'ny firenena eoropeana ny ankamaroany, ary etsy andaniny kosa ireo mpikambana avy amin'ireo fiarahamonim-pirenena vazimba teratany Shipibo eo amin'ny faritra, manome hevitra somary mazava ihany mikasika ny karazana asa misy eo amin'ny asa iraisan-kolontsaina tarihan'ny AA.
Araka ny voalazan'i Dr Paul Roberts, iray amin'ireo mpikambana mpamorona ny Alianza Arkana, ny tetika dia “ny hametraka amin'ny toerany ny tena fiaraha-miombon'antoka maharitra miaraka amin'ireo fikambanana sy ireo fiarahamonim-pirenen'ireo vazimba teratany, manana tanjona hanamafy ny kolontsaina, shipibo”. Ny fandaharanasa “Masomboly ho an'i Amazonia”, natomboky ny AA efa ho taona maromaro izay, dia ohatra iray tsara mikasika ny fiaraha-miombon'antoka : fandaharanasam-piarahamonina mba hamelomana aina an'i Amazonia peroviana tarihan'ireo tanora vazimba teratany.”
Kanefa, ho an'i Dr Roberts, tsy mora ny mitantana araka ny tokony ho izy io asa iraisan-kolontsaina io:
Mila fotoana ny fakàna ny fahatokisan'ireo Shipibo. Voamarik'izy ireo fa maro ireo fikambanana ONG no tonga, avy eo malaky miala, izay mitondra any hino fa mbola haharitra ela izahay no eto.
Iray amin'ireo fanalahidin'ny fahombiazana ny fitarihana ireo Shipibo mba handray anjara mavitrika amin'ny fitantanana:
Mino aho fa zavatra tena manan-danja ny fampidirana ny ankamaroan'ireo Shipibo ao anatin'ny tarika mba hiasa miaraka amin'ny Alianza Arkana. Na ho toy ireo mpiasa tsotra izany, na ho sahala amin'ireo mpanolotsainan'ny fikambanana. Indrindra indrindra, ataonay izay hahazoana antoka fa ireo fikambanana sy ireo fiarahamonim-pirenena izay hiarahanay miasa, dia hiara-hiasa akaiky amin'ny fitadiavana ireo famatsiambola sy amin'ny fandrafetana ireo fangatahana mba hahazoana azy ireny.
Manohy aminà ohatra iray hafa mikasika ny asa vita i Roberts:
Nanomboka tetikasa iray mikasika ny tolotra ho an'ny fahasalamana fototra, ao amin'ny fiarahamonim-pirenena an-drenivohitra Bena Jema izahay izay matetika hiverimberenan'ireo olana mikasika ny fahasalamana. Vehivavy roa no mitantana io tetikasa io – Vehivavy iray Shipibo, manampahaizana manokana mikasika ny fitsaboana nentindrazany amin'ny alalan'ny zavamaniry ary Alemàna iray mpampivelona izay mampiasa homeopatia ihany koa.
Faly ny tenako mahita ny fandrosoan'io tetikasa io. Amiko, ohatra iray tsara mikasika ny asa iraisan-kolontsaina io (eto, eo amin'ny sehatry ny fahasalamana).
Firaisankina sy ireo ady ho an'ny tontolo iainana
Ankoatran'ny tolon'ireo Shipibo, mandray anjara amin'ireo ady ataon'ireo fiarahamonim-pirenena vazimba teratany maro ihany koa ny Alianza Arkana. Izay manamafy ny hafatr'ireo mpitarika ny vazimba teratany tiany ho ampitaina amin'ny ambiny amin'izao tontolo izao. Izany no hita ao amin'ny lahatsary etsy ambany, izay ao anatiny, noho ny fanamarihana ny faha-efapolo taonan'ny fandotoana ireo alan'i Amazonia ao Peroa, dia mangataka ny fanampian'ny fikambanana iraisam-pirenena mba hanohizany ny adiny ho an'ny tontolo iainana, ny fiainana sy ireo renirano i Alfonso Lopez, ilay lehiben'ny fiarahamonim-pirenena Kukama:
Ny vao haingana indrindra, ary noho ny fangatahan'ireo mpitarika amin'ireo fiarahamonim-pirenen'ny vazimba teratany, nandefa fanentanana hanaovana famatsiam-bola iraisana ny AA, mba hahafahana manangona ireo vola ilaina amin'ny fanatontosàna famokarana fanadihadiana iray momba ny vokadratsy mandravarava ateraky ny fambolena voanio. Antenaina fa mba ho vonona ara-potoana ilay fanadihadiana ka mba hitondra ireo feon'ny vazimba teratany mandritra ireo andianà fivoriana fanapahankevitra iraisam-pirenena, ny faran'ny volana aprily. Manambara i Thomas younger sy ny India Banks, mpikambana amin'ny Alianza Arkana, fa:
… Ao Amazonia Peroviana, ny fitrandrahana menaka voanio dia miteraka fakàna tany, fandikan-dalàna mikasika ny fananantany sy ny kolontsain'ireo mponina vazimba teratany, ny famotehana ala goavana, ny fandravàna ny firindran'ny fiainana sy ny tontolo, ny fahamaroan'ny zava-mananaina ary mandray anjara amin'ny fiovan'ny toetrandro. Na eo aza ireo tombontsoa matanjaka sy lavitra izay mandrahona azy ireo, mandray andraikitra ireo fiarahamonim-pirenena ireo manohitra ireo fomba fanao katsentsitra ireo, mba hiarovana ny aina, ireo ala sy ireo taranaka ho avy.
Ny vaovao tsara, tratran'izy ireo ny tanjona mikasika ny fiotazana mialoha ny fiafaràn'ilay fanentanana. Nisaotra ny Facebook i Thomas noho ny fanohanana azy ary nanampy fa:
Efa eo amin'ny fanambàrana izahay izao ary vonona handefa lahatsary iray fohy ho fanentanana (maharitra 4 hatramin'ny 8 minitra) mandritra ireo fivoriana iraisam-pirenena manandanja amin'ny faran'ny volana. Ho vonona amin'ny faran'ny volana may hatramin'ny voalohan'ny volana jona ilay fanadihadiana amin'ny endriny maharitra kokoa (manodidina ny 40 minitra).
“Ireo vehivavy mpanao asatanan'i Bena Jema. Ny asatanana no iray amin'ireo tena asan'ny vehivavy ao amin'ireo fiarahamonim-pirenena vazimba teratany: hosodoko, rary ary famoronana firavaka amin'ny alalan'ny voan-javamaniry. Mitarika ny reny sy ny ankizy handray andraikitra amin'ny asa an-tkantrano sy hiantka ireo filàn'ny tokantrano io asa io”. Tabilao nataon'ireo ankizy ao amin'ny fiarahamonim-pirenena shipiba an'iy Bena Jema nandritra ny atrikasa nokarakarain'ny Alianza Arkana, tafiditra ao anatin'io hafatra io (famerenana nahazoana alalana)
Ny fomba tena tsara indrindra raha hamantatra mikasika ireo asan'ny Alianza Arkana, dia ny mijery ny bilaoginy, natao tamin'ny teny espanola sy anglisy. Ohatra, ito hafatra ito mikasika ny fahombiazan'izy ireo izay tena nanamarika azy indrindra tamin'ny taona 2015 dia tena mahaliana, na koa ity eto ity mikasika ny famoahana Izay azontsika fantarina momba ny Amazonia peroviana (azo sintonina manontolo eto), an'i Dr Paul Roberts, Lehiben'ny Educación Intercultural en Alianza Arkana, sy Laura Dev, manampahaizana ambony amin'ny anjerimanontolo ao Berkeley, Kalifornia.
Afaka arahina amin'ny Facebook, Twitter na You Tube ihany koa ny Alianza Arkana.
Ampahany kely amin'ny tariky ny Alianza Arkana tamin'ny volana Febroary 2015. Sary an'ny pejy Facebook Alianza Arkana. (Famerenana nahazoana alalana)